သတိထားသင့်တဲ့ ဒူးကျီးပေါင်း -
ကိုဗစ် ၁၉ နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ပိုးတွေ့ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ လူနာ စုစုပေါင်း
ပိုးတွေ့ သေဆုံးလူနာ စုစုပေါင်း
ပိုးတွေ့ သေဆုံးလူနာ အရေအတွက်
ပိုးတွေ့ ပြန်လည်သက်သာ လူနာ စုစုပေါင်း
ကျန်းမာသော ဘ၀နေထိုင်မှုနှင့် အလှအပ
ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်နှင့် အမျိုးသမီး ကျန်းမာ‌ရေး
ကိုဗစ် ၁၉ နှင့် ကျန်းမာရေး
#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p4530#30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p-10+00:003030+00:00x30 22မနက်30မနက်-30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p10+00:003030+00:00x302021လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +000004100411မနက်တနင်္လာ=1153#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p+00:0011#2021#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p4530#/30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p-10+00:003030+00:00x30#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p+00:0011#
#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p4530#30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p-10+00:003030+00:00x30 22မနက်30မနက်-30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p10+00:003030+00:00x302021လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +000004100411မနက်တနင်္လာ=1154#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p+00:0011#နိုဝင်ဘာ#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p4530#/30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p-10+00:003030+00:00x30#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p+00:0011#
#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p4530#30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p-10+00:003030+00:00x30 22မနက်30မနက်-30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p10+00:003030+00:00x302021လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +000004100411မနက်တနင်္လာ=1155#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p+00:0011#22#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p4530#/30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p-10+00:003030+00:00x30#!30လာ, 22 Nov 2021 10:04:45 +0000p+00:0011#
” သတိထားသင့်တဲ့ ဒူးကျီးပေါင်း “
‘ အသက်ကြီးလာရင် ဟိုနား ဂျွတ်ဂျွတ် ဂျွတ်ဂျွတ်၊ ဒီနား ဂျွတ်ဂျွတ် ဂျွတ်ဂျွတ် ‘ နာနေတာပဲလို့စာရေးသူအမေကတော့အမြဲပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို သယ်ထားရတဲ့ ဒူးဆစ်ကလေးတွေ ပိုဆိုးပါတယ်။ အထိုင်အထတွေ၊ လှေကားတက်ရတာတွေ ခက်ပြီး ညနေပိုင်းတွေဆို ပိုနာတတ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ဒူးကျီးပေါင်းလို့ ခေါ်လို့ရပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် အရိုးနှစ်ခုကြားမှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မပွတ်အောင် အရိုးနုလေးတွေနဲ့ ခြားထားပါတယ်။ ဒီအရိုးနုလေးတွေ ပွတ်တိုက်ပြီး ပျက်ဆီးသွားတဲ့ အခါ အဆစ်နှစ်ခုထိခိုက်မိပြီး လှုပ်ရှားနိုင်မှာ နာလာတာ၊ အဆစ်ပုံပျက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးတာ၊ အဝလွန်တာ၊ အဆစ်ရောဂါနဲ့ အခြားသော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒူးကျီးပေါင်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
အသက် ၅၀ ကျော်လာရင် ပိုအဖြစ်များပြီး အမျိုးသမီးတွေက ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သက်သာအောင် ကုသနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပေးမယ့် အဓိကကတော့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အမြစ်ပြတ်ကုသ တာမျိုး မရပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာသက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်းတွေတော့ ရှိပါတယ်။
X -ray ရိုက်ကြည့်တာ အရမ်းနာလာရင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်တာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ချတာ ၊ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေဖို့ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းတာမျိုး လုပ်ပေးရပါမယ်။
အဆစ်ကြားကို ဆေးထိုးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်များတဲ့ အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်သင့်ပါတယ်။
Glucosamine တွေ၊ ငါးကြီးဆီတွေသောက်ရင် ကတော့ အချို့မှာ သက်သာပေမယ့် ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဖြစ်တာကိုလည်း သုတေသနစာတမ်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
အကယ်၍ ရောဂါအခြေအနေက ရင့်လာတယ်၊ ဆိုးလာတယ် ဆိုရင်တော့ ဒူးအစားထိုး ကုသတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးရင် ဒူးနာတယ်ဆိုတာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေမေမေ၊ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒူးနာပြီဆိုရင်တော့ မပေါ့ဆပါနဲ့။ ရောဂါ အခြေအနေမဆိုးခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE မှ ဆရာဝန်တွေကို မနက် ၈ မှ ည ၁၀နာရီ အတွင်း အခမဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်..
𝗛𝗢𝗣𝗘 𝗮𝗽𝗽 ဒေါင်းရန် :(For Android)
ဒူးကျီးပေါင်း #ကျီးပေါင်း #ဒူးနာရောဂါ
Nov 22, 2021 Health, ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ
ရာသီတုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးကို ဘာလို့ နှစ်စဥ်ထိုးနှံသင့်တာလဲ…
ဖုန်းတွေကို အနားမှာထားအိပ်တာ တကယ်ပဲသင့်တော်ရဲ့လား…
“ဘယ်လိုစားစား ဝ မလာသူများအတွက် “
ရိုးရိုး ချောင်းဆိုးလား.. ကလေး လေပြွန်ငယ်ရောင်တာလား..
၁၈ နှစ်မပြည့်ခင် ရည်းစားနဲ့အတူနေသင့်လား?
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၂ကြိမ် ထိုးပြီးလို့ စိတ်ချရပြီလား?
အမှတ် ၁၄၈၊ ပြည်လမ်း၊ အေ၀မ်းလမ်းထိပ်၊